Maamulka Hiiraan oo ku baaqay in gurmad loo fidiyo qoysaska ka soo laabanaya Yemen – Radio Muqdisho
Boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacaya dalka Yemen oo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan ayaa codsaday in gargaar lala soo gaaro, iyadoo maaulka gobalka Hiirana uu sheegay in wax ay qaban doonan inta karankooda ah.
Guddoomiye ku-xigeenka Gobolka Hiiraan ee dhanka arrimaha bulshada Sheekh Xuseen Cismaan Cali kormeeray goobo ay degeen qoysas ka yimid dalka Yemen ayaa sheegay in dhankooda ay gacan ka geysan doonaan, sidii gurmad loogu fidin lahaa muwaadiniinta ka soo carareysa Yemen.
Sheekh Xuseen ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo inta kale ee wax haysata inay il gaar ah ku eegaan qoysaska ka soo laabanaya Yemen ee ay saameeyeen dagaallada dalkaasi ka taagan, waxaana uu sheegay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay foodda nagu soo hayso, loona baahanyahay in la gacan qabto qoysaskaasi.
Qaar ka mid ah qoysaska ka soo laabanaya Yemen oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inaysan haysanin waxyaabo ay hooy ka dhigtaan, waxaana ay intaa ku dareen in kuwa hadda soo gaaray Beladweyne ay gaarayaan ku dhawaad todobo boqol.
Ku dhawaad Todobo kun Arday oo u fadhiisatay Imtixaanka Shahaadiga “SAWIRRO”